Botulism Yintsana | Amaphepha ombala wamahhala okukhuphela
izinto ezibolileyo usana
Isiphumo esinobungozi busika kunye nesiraphu ye-maple kwiintsana
Ayikho inyosi kwaye ayikho isiraphu ye-maple kude kube ngu-1. lokuzalwa
Isifo esingaqhelekanga kodwa esibi kakhulu kwiintsana kuyintsana ye-botulism. Izinto ezibolileyo livela kwisiLatini botulus (sausage), ebizwa ngokuba ityhefu inyama kwaye zisongele ubomi, ngenxa yoluvo botulinum (zeClostridium igciwane botulinum) yabangela ityhefu.
I-botulism yasebantwaneni ngunyosi okanye isiraphu ye-maple
Njengomqhubi we-toxin yongezwa kwesola okanye isiraphu ye-maple ukuze i-sweeten z. Njengama teysi okanye i-porridge ebizwa ngokuba ngumntwana. Utyando lweHuveli lunandi mnandi kwaye lukutya okudliwayo, oku kusetyenziselwa unyango. Ijusi legolide linikezelwa ezininzi iinkalo zempilo kwaye oku kudla akuxhomekeke ekubhaliweyo. Ukuze kubulawe ukutya kwebhaktiriya kufuneka kufudumele ngaphezulu kwe-120 ° degrees ixesha elide. Oku akunakwenzeka kubusi. Uyimveliso yendalo kwaye ke unikwa kwakhona kwiivenkile.
Ubululism lweintsana - Ingozi kwiintsana ngokusebenzisa ubusi
Ukungakwazi zilondolozwe okanye hermetically etywiniweyo ukutya, ngoko ubusi okanye maple isiraphu, apho ikhe kunye yoluvo, luwela zenza igciwane nokufikelela ukusetyenziswa kwi izihluma emathunjini.
Kwiintsana ukuya kunyaka omnye, lo sengozini iinyanga 6, kunye ukuzithethelela umzimba ezingazinzanga ngakumbi nezityalo buthathaka isisu, nguye ityhefu ihanjiswa ekudibaneni wamathumbu kungena egazini kwaye ukususela ngoko sifumana kwi kwalapho kwinkqubo peripheral nervous apho ukukhululwa i neuronal ebalulekileyo Isithenjwa somthunywa sithintelwe.
Umphumo wetyhefu uvimbela ukubonakaliswa phakathi kwamathambo kunye nezihlunu. A ukukhubazeka nezinambuzane zonke iingingqi omzimba kunye organ uvingce emathunjini Umphumela kakhulu. Impembelelo ye-toxin ayisoloko iphawulwe ngokukhawuleza, ngokugqithiseleyo iimpawu zingabonwa kuphela emva kweentsuku, kwiveki. Buthathaka izihlunu iliso, ukungabikho sobuso, ukushwabana izihlunu zemiphunga ukuya nangokobuncinane umoya kunye ukumisa ukuphefumla, yokuginya, kunye izihlunu ubuthathaka kwinkqubo musculoskeletal ziimpawu ityiwe ngu botulinum kwaye kunokukhokelela nokufa ukuba azifumananga ngoko nangoko, olungxamisekileyo labagula kakhulu. Ngaphantsi kohlaziyo olupheleleyo lokunakekelwa kwonyango kunokwenzeka kodwa kufuneka uqikelele ngomonakalo olungeleyo.
Unyaka ngamnye umzekelo we-botulism yabantwana uxelwa kwiRobert Koch Institute eBerlin. Uphononongo olu hlobo lobutyhefu kunye nempembelelo yalo lwenziwa eYurophu ukususela kwi-1976, emva kokuqala kwimeko kwaye yafunyaniswa eMelika. Amatyala amaninzi avela kancane e-Australia, e-US nakwiindawo zaseJapan. Kukho ukudibanisa ne-infant disease syndrome. EYurophu, kunomsebenzi wokubika phantsi koMthetho wokuKhuselwa koGawulayo.
Kuba impilo yomntwana, de kube ngowokuqala wokuzalwa, kufuneka ihanjiswe ngesipho sosizi kunye nesiraphu ye-maple ukuphepha umngcipheko we-botulism yabantwana ukuphepha.
Kwiintsana, abantwana, abafikisayo kunye nabantu abadala, kunye ukusebenza ngokupheleleyo flora emathunjini nobunempilo colon ekudibaneni, le tyhefu esiswini saso, ngaphandle apho lingena egazini umzimba, njengoko kwenzeka ngokusebenzisa ezifumaneka ubusi ngeedosi ezisezantsi. Ukurekhodwa kobutyhefu kumama oongikazi abathathe inyosi kungenjalo.
Ukungafani nalokhu, nangona kunjalo, isilonda kunye nokunyanga kwamachiza enobusi. Ngokuqhelekileyo, kufuneka kuqatshelwe ukuba umntu makabeke ukutya okumnandi kubantwana, iipapa ezenziwe ekhaya kunye netiyi / iziphuzo ngokubanzi, njengoko oku kubangela kwaye kubangele ezinye iingozi okanye izifo.
Ngokweqile, imeko yokuqala yokuqala ye-botulism yabantwana itholakala kwi-1976 eCalifornia. EJamani, kuye kwaba nomyinge wolu hlobo unyaka ngamnye ukususela kwi-1996. Kwisisu se-toxins ebusayo. Nangona kunjalo, kunokuthatha iintsuku ezimbalwa kwiiveki ukuba iimpawu zibe zibonakala. Ngako oko, kunzima kakhulu oogqirha ukufumana uxhulumaniso phakathi kokutya nezifo. Ukuba i-toxin ingena kwigazi ngokwemathumbu, isasazwa emzimbeni. Emva koko iyanamathela ekuphelelweni kwemizwa kwaye ikhusela iinkqubo ezibalulekileyo apho, ezinjengeentlobo ze-muscle fractures. Isiphumo sisifo sokukhubazeka kwemisipha. Ngelishwa, njengomntu omdala, awukwazi ukuyiphatha umntwana nge-antitoxin.